» तेह्रथुम पावरको आईपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने, २३ लाखभन्दा बढिको हात खाली, कतिले पाउँदैछन् आईपिओ ?
तेह्रथुम पावरको आईपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने, २३ लाखभन्दा बढिको हात खाली, कतिले पाउँदैछन् आईपिओ ?
२३ भाद्र २०७८, बुधबार ०७:१४
काठमाडौं । तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरेको आठ लाख कित्ता आईपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । उक्त आईीपओको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईविएल एस क्यापिटलका अनुसार शुक्रबार बिहान शेयर बाँडफाँड गरिने छ ।
मंगलबार प्रिअलोटमेन्ट सकिएको र सेबोनबाट स्वीकृत लिएपछि बाँडफाँड भने विहान शुक्रबार गर्ने तयारी भएको एनआईविएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।
कूल २३ लाख ९६ हजार ३४८ जनाले आवेदन दिएको आईपिओ जम्मा ७४ हजार ४०० जनाले मात्रै पाउने कम्पनीले जनाएको छ । बाँकी रहेका २३ लाख २१ हजार ९४८ जनाको हात खाली हुनेछ ।
कम्पनीले भदौ ९ गते देखि १३ गतेसम्म ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो । कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात १६ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात ४० हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी रहेको सात लाख ४४ हजार कित्ता शेयर मात्रै सर्वसाधारणमा बाँडफाँड गर्ने गरी प्रि अलोटमेन्ट सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीको शेयरमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथामार्फत आईपिओ बाँडफाँड हुनेछ । आईपिओ निष्काशन पछि कम्पनीको कूल चुक्ता पुँजि ४० करोड पुग्नेछ । कम्पनीले जारी पुजिको २० प्रतिशत अर्थात १२ करोड रुपयाँको १२ लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गरेको हो । सो मध्ये एक तिहाई अर्थात चार लाख कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीको लागि वितरण गरेर बाँकी रहेको आठ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई वितरण गरेको हो ।
साहस उर्जाको आइपीओमा साढे ५ गुणा बढीको आवेदन
दशैंका लागि अग्रिम टिकट भोलीदेखी खुल्ने, कहाँको भाडा कति ? (सूचीसहित)
मासिक उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरेकामा अर्थमन्त्री शर्मालाई मेरुदण्ड पक्षघात समूहकोे धन्यवाद
आइएमईले दशैंंमा डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो हप्ताका दुई विजेता घोषणा
युनाइटेड मोदीका प्रतिनिधि संचालक आचार्यको राजिनामा स्वीकृत
थप ८३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ९ जनाको मृत्यु
मध्य भोटेकोशीको आइपीओ भोली बिहान ९ बजे बाँडफाँड हुने
म्याद थप भएका आयोजनाको बीमा नविकरण एक्सेस भ्यालुसहित उपयुक्त दररेटमा गराउन बीमक संघलाई महासंघको आग्रह
सानिमा बैंकले ल्यायो ‘दशैं धमाका’ योजना, दराजमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी २५ सय सम्मको छुट
युवासँग महालक्ष्मी लाइफको राष्ट्रिय बीमा जागरण जिल्ला कमिटि गठन
अपर तामाकोशीको वार्षिक साधारण सभा असोज १९ गते, यस्ता छन् एजेण्डा
नेप्से ६१ अंकले घट्दा कारोबार खुम्चियो, म्यचुअल फण्ड बाहेकका सबै समूह राताम्य
मेट लाइफको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन बीमा समितिबाट स्वीकृत, तीन कम्पनीको स्वीकृत हुने प्रक्रियामा